कुलमान – Himalaya Television
कुलमानकाे विदाइ : यस्ताे सुझाव दिएर गए (भिडियोसहित)
३० भदौ, २०७७ काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि आज औपचारिक रुपमा विदाई लिनुभएको छ । विदाई समारोहमा भावुक देखिएका घिसिङले आगामी दिनमा पनि देश र जनताकै सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विदाइ...
जाँदाजाँदै कुलमान घिसिङले भने–मेरो प्रेरणाका स्रोत नेपाली जनता हुन् (भिडियोसहित)
३० भदौ, २०७७ काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको औपचारिक रुपमा विदाई भएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले कार्यक्रम गरी घिसिङको विदाई गरेका हुन् । भदौ १८ गते पदावधि सकिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः नियुक्त नगरेपछि आज...
कुलमानको पुनःनियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अस्वीकार
३० भदौ, २०७७ काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण रोकिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तावले...
विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिन नेकपा प्रवक्ताको माग
२९ भदौ, २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिन माग गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नु अघि ट्वीटरमार्फत नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले प्राधिकरणमा घिसिङको आवश्यकता अझै रहेकाले पुननिर्यक्ति...
कुलमानको कार्यकाल सकियो, के के गरे त चार वर्षमा ? (भिडियोसहित)
२८ भदौ २०७७, काठमाडौं । २०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युयत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनेका कुलमान घिसिङको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ । ४ वर्ष प्राधिकरणको प्रमूख बनेका घिसिङले यस अ‍वधिमा केके गरे त ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक...